Author Topic: यौन कथा - नैना भाउजु र अरु कथाहरु - पल्लव साहित्यिक पत्रिकाको यौन विशेषङ्कबाट (Read 4408 times)
नैना भाउजू ल्वाङ् सुकुमेल चपाउँदै चौतारीमा निस्किएपछि सबै हाकिमहरूमा उत्साहको सञ्चार हुन्थ्यो । एकछिन गफको सिङौरी खेलेपछि अलिक शान्त मन लिएर सबै आ-आफ्ना निवासतिर लाग्दथे । बाँझी, टटली अलिक कुरौटे खालकी नैना भाउजू सबैलाई हिकेर गफ गर्दथिन् । हिजो अस्ति जस्तै आज पनि सबै हाकिमहरू सिरानबजारको चौतारीमा बसेर गफ चुट्तै थिए । भित्री मनैदेखि सबै नैना भाउजूको प्रतीक्षामा अल्भिmएका थिए र भाउजू त्यस चौतारीमा निस्किएपछि एकछिन उनीसँग जिस्किँदै, इत्रिँदै मुखका कीरा मारेर र्फकने सुरमा थिए । प्रत्येक दिनजसो साढे नौ बजेतिर अफिस जान भनेर नैना भाउजू त्यो चौतारोमा निस्किदा सिरानबजारमा पर्ने चौतारोमा जम्मा भएका हाकिम-अधिकृतहरू उनलाई बीचमा पारेर चारैतिरबाट तछाड-मछाड गरेर गफ चुटिरहेका देखिन्थे ।
सुदूरविकट भौगोलिक मध्य प्रदेशमा अवस्थित त्यस जिल्लाको सदरमुकाममा केही विद्यार्थी र तल्लो तहका जागीरदारबाहेक महिलावर्गको त्यति उल्लेख्य गतिविधि थिएन । कुनै हाकिमले परिवार लगेको थिएन । कुनै कार्यालयमा एकाध घण्टा र कतिमा त कामै नहुने त्यस दुर्गम जिल्लाको सदरमुकाममा भएभरका अड्डा-अदालतहरू आसपास फैलिएर त्यही सिरानबजार भनिने क्षेत्रमा केन्द्रित थिए । अड्डाहरू भएको ठाउँमुनि तल माथि आउने जाने गौँडोकै मुखमा सानो चहुर अनि दुइ विशाल वरपिपल दम्पतिहरू उभिएका थिए । सहस्र हाँगाबिङ्गाहरूमात्र फैलिएको त्यस विशालकाय वरपीपल जोडीको फेदमा अत्यन्त सफा, सुन्दर र फराकिलो चौतारो थियो । बिहानैदेखि त्यही चौतारामा निस्किएर त्यस जिल्लाका हाकिम, अधिकृतहरू चार-पाँच कप चिया सुर्क्याउने, सरकारको आलोचना गर्ने अनि आ-आफ्ना स्वास्नी र छोराछोरीको प्रशंसा गर्ने र बिहान बितिसकेपछि नैना भाउजूसँग एकछिन गफ छाँटेर मुखको चिलाई मेट्ने गर्दथे । महिला विकास अधिकृत बाहेक त्यस जिल्लामा कुनै पनि पोथी हाकिम थिएन ।
तर उनको बसउठ चिनाजानी जिल्लाभरिका सबै हाकिमहरूसँग थियो । ठाउँ हेरी उनको लवाइ पहिरन, बोलीचाली र अनुहार पनि सफा सुग्घर र सभ्य खालको थियो । तीस बत्तीसे जस्ती लाग्ने अलिक टटली खालकी नैना भाउजू सारै पुखली, फरासिली र रसिली थिइन् । उनको
बाँझो शरीर बैँसका हाँगाबिँगाहरू झोल्लिएर लत्रिए पनि उति खस्किएको थिएन । उनलाई भेट्ने बित्तिकै अलिक ठिटाखाले नाङ्गा हाकिमहरू त काँच्चै निलौलाझैँ गरेर वरपर झुम्मिने गर्दथे ।
“आज दिउसोमासै घिचेछ मोरो कालेले” नैना भाउजू मनमनै भनिरहेकी थिइन् र अतिशय शराबको गन्धको मुस्लो छल्न यताउता मुन्टो फर्काउँदै पनि थिइन् । “तपाईंलाई अप्ठ्यारो भै राखेछ ! नैनाजी ! यी ली राख्नोस् न सिरानी !” एकछिन विश्राम गर्दै कालो
मोटो त्यस व्यक्तिले नैना भाउजूको टाउको र नितम्बमुनि एक-एकवटा डल्लपका चकला राखिदियो । उनका कर्मेन्द्रियहरू अरू बढी सक्रिय हुँदै गए । चुरा बजेर छिर्लिङ्-छिर्लिङ्को आवाज प्रतिध्वनित हुँदा एकातिर आनन्दानुभूतिमा तीव्रता थपिएको थियो भने अर्कोतिर चियो गर्ने शङ्का र लज्जाबोधबाट केही खल्लो लागेजस्तो पनि भइरहेथ्यो ।
“एड्स हुन्छ भन्छन् सर ! हिजोआज सर त केही पनि लाइसिन्न नि ।” नैना भाउजू अर्कोतिर फर्किएर लुगा मिलाउँदै र भन्दै थिइन् ।
“कहाँ कसले हल्ला गरिदिएछ नचाहिने । यस्तो शुद्ध पहाडी हावापानीमा पनि के को एड्स भैलिन्छ ।” पुरुषपक्ष प्रतिवाद गर्दै थियो । अगिपछि औधि मन पर्ने पदार्थ पनि आज अलिक सिक्सिको र दर्ुगन्धझैँ लाग्यो । उनी त्यहाँबाट हतार-हतार बाटा लागेकी थिइन् ।
कहिलेकाहीँ उस्तै हाकिमले कर गरेको बेला नैना भाउजू अलिअलि पिउथिन् पनि । आफैले अलिअलि पिएको बेला अरूको गन्ध त्यति खराब लाग्दैनथ्यो । बरु आनन्ददायक प्रतीत हुन्थ्यो । तर आज त्यो मान्छेले दिउँसै ठर्रा घिचेर डुङ्डुङ्ती गनाएको चाहिँ उनलाई पटक्कै मन परेन । सायद त्यो थाहा पाएकी भए आज उनी चिठी लिएर त्यहाँ जाँदै जाँदैनथिन् । गए पनि हाकिमसमक्ष देखा नपरी दर्ता फाँटबाटै फर्किने थिइन्, तर त्यसो भएन । भेटघाटको शिष्टाचार पूरा गर्न गएकी थिइन् । पहिले हाकिमले बोलाउँदैमा कोठाभित्र पसी हालिछन् । पछि फुत्किन खोज्दा अलिक अप्रिय स्थिति सिर्जना भइहाल्न सक्ने देखेर उनी त्यस मिलनविन्दुको सहयात्री बनेकी थिइन् ।
Re: यौन कथा - नैना भाउजु
“उ हेरिस्योस्त सर !” झयालको अन्तरबाट बाहिर इशारा गर्दै नैना भाउजूले भनिन् । उनले पर्दाले अनुहार छोप्दै कोल्टे आँखाले बाहिर हेरे । उनको मूलढोकै अगाडि चउरमा एउटा जवान घोडाले मैमरा घोडीलाई गाँजेर समागम गर्दै रहेछ । दुवै अश्वराग छरेर उद्दाम भिडन्तमा थिए र वरपरको वातावरण कम्पायमान बनाउँदै हिनहिनाइरहेका थिए । घोडीको यौनाङ्गबाट दूधका पचकाहरू छरिँदै थिए । बाँधिएको घोडी नखरा देखाएझैँ र भाग्न फुत्कन प्रयास गर्दै गरेझैँ लाग्थ्यो । तर आफ्नो सम्पूर्ण कामेच्छा समाप्त नगरी न छोडेझैँ घोडाचाहिँ लगातार घोडीमाथि लागिरहेथ्यो । दूधका पचाका घरी बन्द हुँदै र घरी वर्षै थिए । त्यो दृश्यप्रति टोलाइरहेका प्रौढ व्यक्तित्व बिचरा श्रीमान् कुन बेला स्खलित भएछन् उनलाई होसै भएन र त्यहाँ आयोजित कार्यारम्भको लागि उनी असक्षम भइसकेछन् ।
हिँड्ने बेलामा श्रीमान्ले दुइसय रूपैयाँ हातमा राखिदिएथे । उनले पर्दैन भन्दाभन्दै हात थापेर नोट हत्याइन् र धोतीको फुर्कोमा कसिलो गाँठो पारिन् ।
“बिचरा बूढोले केही काम लिन सकेन । व्यर्थै रहर गरेर बोलायो मात्रै र दुइसय खेर फाल्यो ।” बाहिर निस्किएपछि नैना भाउजू मनमनै भन्दै थिइन् – “तर घुस खाको पैसा त होला नि ।” उनले तर्क थपिन् । आज बिहानैदेखि कचल्टिएको यौन पिपासा शान्त गर्ने उपाय नदेखेर उनी एकछिन घोत्लिएर चौतारोमा बसिन् । ग्राहक बन्न सक्ने जवान पुरुष कतै भेटिएन । उनी अधीर र अशान्त मन लिएर घर फर्किइन् ।
“एकदम कडा र्ठराचाहिँ एक बोतल खानु हुन्छ दिनको । त्यसपछि उहाँ इन्तु न चिन्तु भएर केही नखाई बेहोस भएर सुत्नु हुन्छ, उहाँसँग हिजोआज त सम्पर्क र बस उठ केही हुँदैन । अझ कहिले त एक बोतलले नपुगेर अर्को बोतल थप्नुहुन्छ । अरू नास्ता खाना सब बन्द । अनि यस्तोबाट के हुनु नि सर ।”
आज हाकिमलाई भनेर ल्याएको कालो अङ्गुर डर्ीर्.इ. साहेबकै निवासमा छाडेर गइछन् । अर्को दिन पनि बिहानैदेखि पानी पर्‍यो । चौतारीको जमघट शून्य रहृयो । सबेरैदेखि नै नैना भाउजू पनि जिल्लाका बडाहाकिमको निवासमा थिइन् र कहिले दाल-चामल केलाउने, कहिले लुगा बिस्तारा मिलाउने, कहिले भान्छातिर गएर भान्छे केटालाई खाना राम्रो बनाउन अहर््राईसिकाई गर्ने जस्ता कामहरूमा व्यस्त थिइन् । प्रत्येक धन्दा र आदेश सँगै उनका चञ्चल आँखाहरू हाकिम साहेबतिर परिरहेका हुन्थे । हुन त प्रभातकालीन भेटमै उनीहरूले शारीरिक कामोद्दीपनको ज्वारभाटालाई शान्त पारिसकेका थिए र सम्भोगान्तरमा क्षरित आलो गन्ध डुङ्डुङ्ती गनाएर सन्तोषको अनुभूतिमा मग्न थिए । भर्खरै प्रौढताको सिँढीमा उक्लिन थालेको हाकिम साहेबको हृष्टपुष्ट ज्यू जवान देख्तै अक्सर नैना भाउजू भावातिरेकको अवस्थामा पुग्दथिन् । उनको हँसिलो चेहरा, रसिक स्वभाव, विनोदी आदत र सौर्न्दर्य पारखी चेतनाले गर्दा नैना भाउजू लठ्ठ परेकी थिइन् र अरू हाकिमसँग भन्दा उनैसँग बढी सम्पर्क पनि गर्दथिन् । तर उनीकहाँ लाग्ने भीड, व्यस्तता र बेसी जिम्मेवारीले गर्दा बेलाकुबेला जथाभावी आउन जान र बसउठ गर्ने जस्ता कुरामा ती दुवै र्सतर्क थिए ।
दमिनी केटी भन्दै रुदै गर्दै थिई । उनको मन कुँडिएर घुँक्क घुँक्कमा विस्फोट हुँदै थियो । नैना भाउजू उसलाई सम्झाइबुझाई गर्दै त्यो बच्चा हातमा लिएर खेलाउँदै पनि थिइन् । उनलाई त्यो बच्चा मागेर पालौँ जस्तो लागिरहेको थियो । निःसन्तान नैना भाउजूको उजाड मातृत्व त्यो सुन्दर, स्वस्थ र असहाय बालकप्रति दयाद्र बनेर पग्लिदै थियो । बडाहाकिमले त्यो केटीसँग निवेदन लिएर तोक आदेश गरिदिए । अनि भान्से केटोलाई साथमा लगाएर कारवाही अघि बढाउन ठानातिर पठाइदिए । भान्छे केटो अघि लाग्यो । अलिक समालिएर त्यो केटी पछि लागी ।
“दिवा शयन त्यति राम्रो नभए पनि आनन्दकारक अवश्य हो ।” उनी मनमनै सम्वाद मग्न हुँदै जुरुक्क उठे, मुख धोएर कपडा फेरे । अनि कार्यालयतिरको बाटो लागे ।
यस्तै-यस्तै गरी नैना भाउजूले त्यस जिल्लामा आउने सबैजसो हाकिमहरूको पालैपालो सच्चा साथी बनेर बैँसका दिनहरू मोजमस्तीमा बिताउँदै गइन् । उनको मादक गन्ध र कामुक स्पर्शबाट सबै अभिभूत रहे । नयाँ जीवनको सञ्चार लिँदै रहे ।
अलि दिनसम्म आँधीपछिको प्रभातझैँ उनको दिनचर्या गतिहीन एक तमासको र सात्विक खालको रहृयो । साहचर्य कतै भएन । शुद्ध खानपान रहनसहनमा सौम्यता जम्यो । वैधव्य वरणको केही समय बितेपछि नैना भाउजू झन् सुन्दर, सफा र पुखली बन्दै गइन् । सुरुको सात्विक आचरण र शान्त प्रकृति धेरै दिन दीगो रहन सकेन । अभिसारको क्रम फेरि सुरु भयो । विना बारबन्धन स्वच्छन्द विचरण गर्ने जङ्गली अर्नाजस्तै उनी स्वतन्त्र र छाडा बनेर निर्वाध अभिसारमा सक्रिय भइन् । यता भित्रभित्रै उनको मनमा चिन्ता पनि पलाइरहेको थियो । किनभने पहिले पतिरूपी बन्धन या आड भरोसा थियो । पतिको अस्तित्वमा उनको अभिसार सुरक्षित थियो । कहिल्यै गर्हित र लाञ्छित बन्ने शङ्का थिएन । समयको नियन्त्रण थियो । अब त्यो नरहँदा कतै समाजको आँखामा अवहेलित र गर्हित वाइफाले बनिन्छ कि भन्ने धुकचुकी उनको अन्तःस्करणमा टाँस्सिइरहेको थियो ।
वैधव्य वरणको एकाध महिनापछि नै पुनः चालु भएको नैना भाउजूको अभिसारको क्रम दुइचार महिना बित्दा-नबित्दै अरू बढेर गयो । पहिले दिनमा र त्यसमा पनि अफिस समय आसपासमात्र लुकिछिपी चल्ने चर्तिकला अब झाङ्गिँदै फैलिदै जान लाग्यो । हुँदाहुँदै नैना भाउजू धेरैजसो घरै जान छाडेर दिनरात रसरङ्गमा बिताउन थालिन् । घरै गए पनि उनको अघिपछि दुइचार पुरुषमित्रहरू अवश्य हुन्थे र ती सबै हाकिममुनिका साधारण कर्मचारीहरू हुन्थे । अब गाउँलेहरू नैना भाउजूको बारे धेरै नाटीकुटीका कुराहरू झिकेर गाउँबाटै हटाउन पाए हुन्थ्यो भन्न थाले । बजारियाहरू हेपेर कर्के नजर लगाउने भएर पिठ्यूपछाडि कुरा काटेर गिल्ली गर्न थाले । तर नैना भाउजूको अगाडि हम्मेसी मुख फोर्न कसैको ताकत थिएन । भित्रभित्रै बारुद भएर कुराहरू सल्कँदै थिए । यता शीतल हावामा नैना भाउजूको स्वच्छन्द जीवन चङ्गाझैँ कावा खाइरहेको थियो ।
फेरि एउटा कालखण्ड बितेछ, समयचक्र आफ्नै गतिमा गुड्दै थियो । केही समयदेखि रजस्वला हुन बन्द भएपछि विधुइ नैना भाउजू फेरि एकपटक स्तब्ध भइन् । डाक्टर जचाउँदा गर्भ रहेको ठहर भयो । व्यभिचार र अभिसारमा विचरण गरिरहने उनको घुमन्ते जीवनमा एक्कासि परिवर्तनहरू देखिए । उनी अन्तरमुखी र एकाङ्की बन्दै गइन् । अलि दिनपछि फेरि मन दरिँदै गयो । उनले आफूलाई दुइ जीउ भएको समाचार सबै सम्बन्धित हाकिमहरूकहाँ पुर्‍याएर खैलाबैला मच्चाइदिइन् । सबैले उनलाई गर्भपतन गराउने सल्लाह दिए । अनि त्यसको लागि पर्ने भाडा भरोट र आर्थिक दायित्व आफू ब्यहोर्न तत्पर पनि भए । तर नैना भाउजू अर्कै कुरा सोचेर दरिदै गएकी थिइन् । आफ्नो गर्भ संरक्षण गरेर एउटा सन्तान जन्माउने र कुनै हाकिमको धर्मपत्नी भएर जीवन बिताउने चाह उनमा तीव्र बन्दै गयो । उनी त्यहाँका अलिक जवान र कमाई काज हुने खाइलाग्दा हाकिमहरूलाई आफू श्रीमती भएर बस्ने प्रस्ताव राखेर मन चोर्न थालिन् । त्यसपछि उनलाई देख्नेबित्तिकै सबै हाकिमहरू दुर्दुहाइ गरेर तर्सिन थाले ।
– नयाँ बानेश्वर , काठमाडौँ ।
यौन कथा - कल्पना
- सरस्वती शर्मा
यसरी अनायासै उनीहरूले क्याम्पस प्रवेशको पहिलो दिनमा नै यस्तो अनुभूतिको सामना गर्नुपर्‍यो । यसपछिका दिनहरूमा भेट हुँदा र समीपमा जोडिएर उठ्दाबस्दाको समयमा एकले अर्काको अङ्गमा परस्पर हुने सर्ंर्सगले त झन् दुवैको ज्यानमा अनौठो झन्झनाहट करेन्ट नै पैदा हुन्थ्यो । तर दुवैलाई केही लाज लागेको कारण एकअर्काले कुरा खोल्न चाहँदैनथे । अझ शारीरिक र्घष्ाणको अनुभूति अभ्यास गर्ने तिर्खामा निर्लिप्त हुन थाले । बिस्तारैबिस्तारै दुवैजनाले लाजलाई पचाउँदै एकआपसमा परिचय गर्ने अठोट गरेर आन्तरिक भनौँ या आत्मीय मायाको सुरुवात गर्दै गए । सुरुसुरुमा दुवैले आ-आफ्ना विगतलाई यौन कथा बनाएर एकले अर्कालाई सुनाउन थाले । यसरी उनीहरूको एकआपसीय भलाकुसारीको सुरुवात भयो । मानवीय बागमा ती दुवैजनाको कोपिला फक्रिसकेको हुनाले दुवैजना आपसमा फूलका सुगन्धित वासनामा लिप्त हुन चाहन्थे । त्यसैले गर्दा रमाले भन्दा पहिला शरदबाबुले वासना विचलित हुँदै प्रस्ताव अगाडि बढायो । रमाले पनि समयले कामवासनाको माग गरिसकेको हुनाले मौनस्वीकृति जनाइन् । यसरी धेरै कुराकानी गरेपछि भोलि भेट्ने वाचा गर्दै दुवै छुट्टिएर आ-आफ्ना बासस्थानतिर लागे ।
कठै निन्द्रा पो के लाग्नु थियो र – पलङमा पनि सबै ओछयानले कता-कता काउकुती लगाएको अनुभव हुन थाल्यो । तकियालाई जाङ्मा राखेर शरदबाबुको सम्झनामा रम्दारम्दै आँखा लागेछ, उनलाई थाहै भएन । बिस्तारै लागेको मस्त निन्द्राले शरदबाबुलाई उनको काखमा ल्याइदियो । दुवैजना एकैसाथ बसेर कता-कता जिस्किएको, चलेको अनुभव हुनथाल्यो । कतिखेर-कतिखेर दुवैको अधरहरू एकआपसमा जोडिन पुगे, नयनहरू आफैँ रसाएर एकआपसमा विलय भएको आभास गर्न थाले । शरदबाबुको हात पनि रमाको स्वास्नी मान्छेमा र रमाको हात पनि शरदबाबुको लोग्ने मान्छेमा पुगेकोझैँ लाग्न थाल्यो । उनका निन्द्रामय संसारको सफर गरिरहेको शरीर एकाएक सबै नशा-नशामा वायुवेगमा रक्तसञ्चार भएकोजस्तो हुँदाहुँदै रमाले शरदबाबुलाई आफूभित्र अनारीमा प्रवेश गरेको देखिन् । यै उन्माद र उत्तेजना लाग्दालाग्दै कता-कता शरदबाबुले गालामा चुम्बन गर्दै दुवै हातले भर्खरको कलशमा जोडले अँठयाएको स्वप्नील पीडाले ऐया, नाई-नाई … भनेर उनी च्याँठिइन् ।
छोरीले यस्तो भनेको आवाज बाहिर सुनेर आमाले – के भयो छोरी – भन्दै बोलाइन् – रमा … रमा ू अनि रमा पनि त्यो आवाजले ब्युँझिन पुगिन् र यता-उता हेरिन कतै कसैलाई देखिनन् । अनि अचम्म मान्दै बाहिर आएर आमालाई भनिन् – आमा मलाई केही भा’को छैन सुत्नुहोस् । यति भनेर उनी ट्वाइलेटमा गएर आफ्नो स्वास्नीमान्छेमा हेरिन सबै लपक्कै भिजेको देखेर उनी आफैँ छक्क परिन् … अनि हातले छामिन चिप्लो लाग्यो झन् दङ्ग परिन् । आच्या ! यो कस्तो चिप्लो … । फेरि आएर पलङ्मा पल्टिदै सोच्न थालिन् – शरदबाबुले आफू टाढा बसेर पनि कसरी भिजाइदियो … भन्दै पुनः शरदबाबुसँगको सामीप्यता पाउन खोजिन् तर सम्भव भएन । उनको त्यो रात कल्पनै-कल्पनामा डुबिरहयो- डुबिरहयो ।
Saraswati-Sharma-Jigynashu.jpg (30.4 kB, 440x500 - viewed 517 times.)
यौन लघुकथा - भिजेको लुङ्गी
पोहरसाल । असोज महिना हुनुपर्दछ । काठमाडौँमा म एक्लै लजमा रेडियो सुन्दै थिएँ । बाहिर झमझम पानी पर्दै थियो । ढोका ढक्ढक् गर्‍यो । चुकुल खोलेर ढोका उघारेँ । पुनः ढोका लगाएँ । उहाँहरू भित्र प्रवेश गर्नुभयो । त्यसमध्येको एकजना पुरुष जसलाई म पहिलेदेखि नै चिन्दछु । अर्की युवती थिइन् जसलाई म चिन्दिन थिएँ । दुवै पानीले भिजेका थिए । तौलिया दिएँ । उहाँहरूले तौलियाले जीउ पुछ्नुभयो । ती युवतीलाई मैले कुनै चलचित्र या कुनै फिल्मी पत्रिकामा देखेको हुनुपर्दछ । ठम्याउन सकिन । परिचय भयो । भलाकुसारी कुराकानी पनि भयो । पूर्वपरिचित पुरुषले पाँच प्लेट मःमः मगाउन पैसा दिनुभयो । रेष्टुराँको नाम र ठेगाना पनि बताउनुभयो । मैले हुन्छ भनेर छाता ओढेर मःमः रेष्टुराँमा गएँ र अर्डर गरेँ ।
केही क्षणपछि मःमः प्याक गरेर लजमा फर्किएँ । भित्रबाट चुकुल लगाएको थियो । ढोका ढक्ढक् गरेँ । करिब पन्ध्र मिनेटपछि बल्ल ढोका उघ्रियो ।
ए ! आउनु भो – कति छिटो ! म अचम्मित र सशङ्कित भएँ । दुवैजना आफूमा सम्हालिन नपाउँदै कोठाको ढोका खुलेको रहेछ । मेरो पलङ्गको सिरानीमा पट्याएर राखेको लुङ्गी भिञ्जेगरी ओछ्याइएको रहेछ ।
पुतलीबजार, धरान, सुनसरी ।
केशव राज आमोदी
यो प्वालैप्वालको संसार हो । प्वाल नै हावा, पानी र माटो हो । प्वाल नै जीवन र मृत्यु पनि हो । सम्प्रति, म घरका प्वालहरू टाल्दाटाल्दै हैरान भएको छु । घरमा वनमुसाको प्रकोप बढेपछि समस्या अरू जटिल बन्दोरहेछ । घरमुसाले प्वाल पारेका कोठाहरूमा वनमुसाले खोलेर प्वालमात्र पारेको छैन, भित्रभित्रै ओडार बनाएको छ । यो क्रम रोकिएन भने यति सुन्दर र भव्य घर कुन दिन पहिरिएर गर्ल्यामगुर्लुम्म ढल्छ – पहिरोको नाम सम्झयो कि मलाई कृष्णभीरको र हुस्लाङको पहिरोले आङ सिरिङ्ग पार्छ । अहिले त झन् कृष्णभीरझैँ देश अशान्तिले पहिरिएको छ । जसले गएको साउनको झरी र बाढीको वीभत्स प्रकोप सहेको छ उसले अभाव र समस्याका प्वालबाहेक के देख्न सक्छ र
मसँग अभाव, पीडा, भय, भोक, शोक र न्रि्राका प्वालहरू मात्रै छन् । प्वालहरू क्यै गरे पनि टालिदैनन् । एउटा टाल्यो, अर्को उस्तै, अर्को टाल्यो फेरि अर्को उस्तै । अचम्म झ् प्वाल घट्नको साटो उल्टै बढिरहेको छ । प्वाल बाहिर बस्नेहरूको भन्दा भित्र रमाउनेहरूको दुनियाँ हो । कमिला, स्याल, मुसा, न्याउरीमुसा, लोखर्के, खरायो आदि जन्तुहरू मात्रै प्वालमा बस्दैनन्, अपितु र्सपहरू प्वालमै बस्छन्, दुम्सीहरू प्वालमै रमाउँछन् । हाम्रा आदिम पुर्खाहरू ओडार अर्थात् प्वालमै बसेर आफ्ना दिनचर्याहरू व्यतीत गर्थे रे झ् प्वालमा नै बसेर ‘सिंहले सिकारपछि आराम गर्दछ । सामाजिक जीवजन्तुहरूदेखि लिएर वन्य जीवजन्तुसमेत प्वालमै बसेर जीवनयापन गर्दछन् ।
दुलो, टोड्को र छ्रि्र भनेको प्रकारान्तरमा प्वालै हो । छ्रि्रमा धेरै अनर्थहरू हुने सम्भावना हुँदोरहेछ । दैनिक जीवनमा गरिने समग्र क्रियाकलापहरूमा कमी-कमजोरी रहन गए भने छ्रि्रहरू बढ्दै जान्छन् र अनर्थका सतह फैलिन्छन् । त्यसो त समाजमा छ्रि्र खोजी हिँड्ने छ्रि्रान्वेषीहरूको कमी छैन । हामीहरू ‘कुरा धेरै काम थोरै’ गर्र्छौं तापनि लङ्गौटी कहाँ कतिखेर फुत्कियो थाहा पाउँदैनौँ । हतपतको बेला लतपत भनेझैँ थुप्रै प्वालहरू हृवाङ्ग्रै छोडिदिन्छौँ । नेपालीमा छिरान्वेषणको प्रवृत्ति बढ्दो छ । छिद्र कतै भेटिएन भने विरोधको लागि विरोध गर्र्छौं । वास्तवमा नेपाली प्वालप्रेमी छ, त्यसैले प्वालको चिन्तनमा आफ्ना अधिकांश समयहरू व्यतीत गर्ने गर्दछ ।
अहिले म प्वालको खोजीमा छु । सानातिना वा सामान्य प्वालतिर मेरो दृष्टि गएको छैन । म अलि मोहनीदार प्वालको कल्पनामा छु । मलाई प्वालको मोहनीले किन खिचिरहेको छ – मैले बुझन सकिरहेको छैन । मैले लोकतन्त्र प्राप्तिका निम्ति धेरै त्याग, तपस्या र र्समर्पण गरेको छु । मेरो लोकतन्त्रप्रतिको भक्तिभाव र र्समर्पण मोक्षप्राप्तिका लागि गरेको होइन । हाम्रा ऋषिमुनिहरूले ओडार र गुफामा बसेर तपस्या गरेझैँ मैले पनि पञ्चायतकालभरि भूमिगत रहेर आफ्नो भूमिका निभाएको छु । भूमिगत हुनु भनेको प्रकारान्तरमा प्वालमै रमेर सामूहिक क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु नै हो । प्रजातन्त्र देशमा आएको हल्ला सुने पनि आफूले देखेर अँगालो मार्न पाएको होइन । सुन्न त प्रजातन्त्र आएपछि मेरा सहयात्रीहरूको जीवनमा सुधारात्मक परिवर्तन आएको सुनिरहेकै छु । प्रायः सबैले काँचुली फेरिसकेका छन्, तर मेरो जीवनदशा उस्तै छ । म जहाँको तहीँ छु । काँचुलीको नाममा टोपी फेर्न सकेको छैन । त्यसैले यो बेलाको सम्यक् सदुपयोग मेरा लागि आकाशको फल आँखा तरी मर भएको छ । तैपनि ँमरता क्या नहीँ करता’ वा ँसास रहेसम्म आश’ भनेझैँ प्वालप्रतिको उत्सुकता हराएको छैन । भ्रष्टाचारको बिगबिगी चलेको बेलामा हात लामो पारेर प्वालसम्म पुर्‍याई गमर्क्याउन पाए सुख्खा जीवनमा हरियाली भरिन्थ्यो कि – यसैले पनि मेरो प्वालप्रतिको चाख बढेको हो ।
मेरा कतिपय साथीहरू राजनीतिबाटै भाग्यको लहरो झयाङ्गिने विश्वासमा छन् भने कतिपय धर्म, संस्कृति र साहित्यबाट जीवनलाई र्सार्थक तुल्याउने प्रयत्नमा छन् । मलाई न देशप्रेमले खिँचेको छ र राजनीति दर्शनले । मलाई खिँचेको छ – प्वालको आकर्षाले । म प्वालमहिमा सुन्ने रहरमा छु । अझ यसो भनौँ – म प्वालप्रेमी भएको छु – कहिले नथाक्ने प्वालको साधक ।
मलाई जनताको सेवाभन्दा प्वालबाट मिल्ने मेवा चाहिएको छ । माल न तालको संस्कृतिभन्दा मालामाल बनिने प्वालको ज्यादा ख्याल आइरहेको छ । अहिले काङ्गे्रसीजनहरू पनि हिजोको त्यागतपस्याको लाजसरम त्यागेर पस्ने प्वाल खोज्दै छन् । भित्र पसेकाहरूले बाहिरकालाई तान्ने प्रयास गर्दैछन् । कोही नयाँ प्वालभन्दा पुरानै प्वाल ठीक भनी भित्रभित्र कोचिँदै छन् । अलि चतुरा चाहिँ भित्र पस्ने प्वालका साथै बढी नै गमर्क्याउन पाइने खालको प्वालको तलासमा छन् । सुख, सुविधा र सन्तोष मिल्ने प्वाल सबैलाई अच्छा लाग्दोरहेछ । मौकामा चौका हान्न होशियार जुवाडेहरूको चुरिफुरी हेर्नै लायकको छ । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै क्षेत्रका मानिसहरू यो सुवर्ण्र्ाावसरलाई उम्कन नदिने तयारीमा छन् । तिनलाई प्राकृतिक मौसमले र राजनीतिक वातावरणले राम्रो साथ पनि दिएको छ । स्वार्थी, लोभी र किरन्टोकीहरूले प्वालको चिन्तनमा अधिक समय खर्चन्छन् । बाढी, पहिरो र झरीले बिचल्ली भएका मानिसहरूको हातले पनि लाभका प्वालहरू फराकिलो पारेको छ । असम्भावित आसन्न निर्वाचनमा फैलिने प्वालहरूको प्रतीक्षामा कतिपय धनलुब्ध स्यालहरू अहिलेबाटै ढुक्न थालिसकेका छन् । त्यसो राजनैतिक लस्करदेखि लिएर विभिन्न कोणहरूमा रहेर सानाठूला तस्करहरूसमेत लाग्दा प्वाल प्यारो भएको छ । सबै आ-आफ्नो खाले प्वालको ध्याउन्नमा छन् । म आफै पनि उपयुक्त प्वालको खोजीमा निरन्तर लागिरहेको छु तर भनेजस्तो प्वाल फेला पार्न सकेको छैन ।
यो प्वालको संसार हो । त्यसैले मानिसले प्वालको जप, प्वालको तप र प्वालकै निदिध्यासन गर्दछ । हुनसक्छ म प्वालको प्रसङ्गमा केन्द्रीभूत हुँदा तपाईं पनि कुनै न कुनै प्वालको चिन्तनमा अवश्य हुनुहुन्छ । तपाईं शिष्टता र शालीनताको अभिनयमा पोख्त हुनुहुन्छ भने तपाईंको चिन्तन मेरोजस्तै मानसिक र एकाकी हुनुपर्छ । प्वालमै जिन्दगी गुजारेर प्वालबाट अनभिज्ञ रहेझैँ गर्नुहुन्छ, होइन र –
आजभोलि ओजोन तहमा प्वाल पर्दैछ रे झ् कहाँ नपरेको प्वाल हो र – परोस् । त्यसको विकिरणले भन्दा प्वालको भित्रपट्टिबाट आएको विकिरणले म त्रसित भएको छु । प्वालबाट निस्कने विकिरणको कुप्रभाव कहाँ परेको छैन – साहित्य, सङ्गीत र कलादेखि लिएर धर्म, सम्प्रदाय र संस्कृतिमा समेत असर परिरहेको छ । उद्योगपति, व्यापारी, समाजसेवी र विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूमा यसले आफ्नो कालो छायाँ फिँजाउन सफल भएको छ र त्यसैगरी कूटनीति र राजनीतिमा फैलिएको विकिरणले आफ्नो वर्चस्व कायम गरेकै छ । आजका हरेक तह र तप्काका महानुभावहरूलाई यसै विकिरणले विक्षिप्त बनाएको छ र यसै विकिरणले व्यामोहित अनि सम्मोहित गरेको छ । त्यसैले युवाहरूदेखि लिएर वृद्धसम्मले प्वालको चासो र रुचिमा समय खर्चिरहेका छन् । प्वाल शब्द आफैमा आकर्ष, सुन्दर र मोहनीदार भएर पनि श्रुतिमधुर छ । प्वाललाई मान्छेले पर पन्छाउनै सक्दैन । ध्यान, जप, तप र चिन्तनमा प्वाल छ, मानिसका हरेक क्रियाकलापमा प्वाल छ र मानिसको प्रत्येक चाहनाको दौडमा प्वाल छ । ऊ प्वालमै जन्मेर प्वालमै जीवनलीला र्समर्पण गर्न चाहन्छ र प्वालमै विलय हुन पनि चाहन्छ । यद्यपि उसलाई प्वाल पहिरिने, पुरिने र टालिने हो कि भन्ने पिरलोले खाएको छ, तापनि प्वालको अभावमा जीवनमा धेरै घाटा वा नोक्सान बेहोर्नु परेको छ । प्वालबाट निसृत विकिरणले मानवलीला धराशायी भएको छ तैपनि प्वालबाट विरक्त रहन नसक्ने भएको छ । प्वाल, दिनदिनै खतरा बन्दै गएको छ, त्यसैले म प्वाल बुन्दै छु ।
सम्प्रति, मैले प्वालको मुख थुनिदिएकोले खतराको सम्भावना टरेको छ । वास्तवमा प्वाल भनेको मानवीय दुरभिसन्धिबाट उत्पन्न दुर्नियतिको सूक्ष्म बीज हो । त्यही बीजको विकसित रूप नै व्यभिचार र दुराचार हो । मानवीय खराबीहरूको आरम्भविन्दु नै प्वाल हो । जेहोस्, साँझ पर्दैछ र म प्वालको खोजीमा छु । यहाँनेर यो ठान्नुहोला कि यो यौनाचार गर्दोरहेछ वा मदिरापान गर्दोरहेछ वा तस्करी गर्दोरहेछ । मैले खोजेको प्वाल तपाईंको चिन्तनमा पर्दैन । कारण आफू भोलेबाबाको भक्त परियो, हजुर । त्यसैले भजन कीर्तन गर्ने प्वाल खोज्दैछु । मैले लोभ, लालचका प्वालहरू टालिसकेकोले बाँसुरीका प्वालहरू खोज्दैछु । आफ्नै धुनको बाँसुरी बजाउन पाइयो भने पनि अलिकति आनन्दको अनुभूति त हुन्थ्यो ।
माधवपुर, चितवन ।
दीपेन्द्रकुमार जोशी ‘निक’
ऊ घरबाट निस्केको दुइ मिनेट पनि भएको थिएन । इमरजेन्सी मिटिङ्ग भनेर अफिसबाट फोन आएको हुनाले उसलाई अफिस पुग्न निकै हतार भइरहेको थियो । त्यसैले गल्लीको चोरबाटो हुँदै छिटो-छिटो पाइला चलाउँदै थियो । अचानक ऊ भीडमा एक स्त्रीछायासँग ठोक्किन पुग्छ । जसले गर्दा त्यस छायाको सामान तितरबितर हुन पुग्छ । गल्ती उसैको थियो, उसैको लापरवाही अथवा भनौँ न एकोहोरोपनाले गर्दा त्यो घटना घट्न पुगेको थियो । त्यसैले “सरी !” भन्ने सस्तो अङ्ग्रेजी वाक्य ओकल्दै त्यस छायाको सामान टिप्न सहयोग गर्न थाल्छ । उनी भने हल्का बड्बडाहटसँगै आफ्ना असन्तुष्टिहरू पोख्दै थिइन् – “कस्ता आँखा भएका अन्धाहरू होलान् । केटी देख्नै नहुने … जानीजानी ठोक्किन आइपुग्नु पर्ने ! …”
उसलाई त्यस छायाको टिप्पणीप्रति असन्तोष जाग्यो सायद ! त्यसैले तुरुन्तै प्रतिकार पनि गरिहाल्यो – “बैनी ! तपाईंको आरोप मिथ्या हो । मेरो त्यस्तो कुनै किसिमको नियत थिएन । म अल्लि हतारमा थिएँ त्यसैले यो हुन गएको हो, त्यसमाथि मैले माफी पनि मागिसकेको छु ।”
अमिलो मुखाकृतिसहित त्यस छायाले ऊतिर हेरिन् … तर … तर केही पनि बोल्न सकिनन् । मात्र हेरिरहिन् । लाग्दथ्यो घाँटीसम्म ह्वालह्वालती आइसकेका विष्फोटक शब्दसमूहहरू बीचैमा पानीका बुलबुलासरह तुहिन पुगे । ऊ पनि त्यस स्त्रीछायाको अनुहार हेरेको हेर्‍यै हुन पुग्यो । केही क्षणको हेराइपश्चात् त्यो स्त्रीछाया आश्चर्य, लज्जा एवम् कुन्नी के हो भाव लिई त्यहाँबाट अलप भइन् ।
एकछिनको दिमागीशून्यतापछि ऊ झल्याँस्स हुन्छ – उसलाई याद आउँछ – अफिसको इमर्जेन्सी मिटिङ्गको । समयमै अफिस नपुगिने डरले उसले रिक्सा चढ्ने विचार गर्‍यो र चढी पनि हाल्यो । व्यस्त सहरको व्यस्त गल्ली, ठेलमठेल्लाको विचित्र परिस्थिति । कसैलाई कसैको मतलब नभएको जस्तो भान हुने सहरी वातावरण । ‘किरिङ् … किरिङ्’ को कर्कश ध्वनि निकाल्दै रिक्सा कुद्दै थियो । रिक्साको रफ्तारसँगै उसको मानसपटल पनि ब्रह्माण्डमा रेस लगाउदै थियो । विभिन्न उपक्रम गर्दा पनि उसले आफूलाई सम्हाल्न सकिरहेको थिएन । घरीघरी बचपनको त्यो पाटो र भर्खरै जम्काभेट हुनपुगेको स्त्रीछायाले उसलाई विगततिर धकेलिरहेको भान भइरहेको थियो ।
गजुरी, उसको मावली गाउँ । उसको बचपन त्यसै गाउँमा व्यतीत भएको थियो । अथवा भनौँ न उसले त्यस गाउँसँग आफ्नो सुखदुःख साटफेर गरेको थियो । ऊ भर्खरै १४ वर्षटेक्दै थियो, तर कदकाठी र स्वभावले सानै थियो । उसलाई स्कूल जान निकै मन पथ्र्यो र मिहिनेतसाथ पढ्ने पनि गथ्र्यो । ऊ स्कूलपछिको बाँकी समय गृहकार्य, घरधन्दाका साथै घाँसदाउरा खोज्न र गाईवस्तु चराउन गोठाला साथीहरूका साथ जङ्गलमा बरालिन रमाइलो मान्थ्यो । त्यस गाउँमा ऊ निकै जमेको र रमेको थियो ।
उसको एक साथीलाई ऊ र उसका साथीहरू सानैदेखि ‘गन्टरे’ भन्ने गर्दथे भने अर्को एक साथीको नाम ‘राजकुमार’ भए पनि बिरालोको जस्तो आँखा भएकोले उनीहरूले त्यसलाई ‘बिरालो’ भनेर जिस्क्याउने गर्दथे । ती दुइ पात्रहरू उसकै उमेरका भए पनि हलक्क बढेका थिए र कुनै रूपबाट पनि १८ वर्षन्दा कम्तिका लाग्दैनथे । उनीहरूमा जवानीको जोस पनि निकै चढेको थियो । ती दुइ चम्पाको पछि लागेर हिँडेको निकै देखिन्थ्यो । पछि लाग्नु पनि स्वाभाविकै थियो, चम्पा थिइन् नै राम्री । तर चम्पाको झुकाव विशेषरूपमा राजकुमारतिर बढी देखिन्थ्यो । जसले गर्दा गन्टरे अलिकति चिढिन्थ्यो । तर पनि ऊ चम्पालाई रिझाउन हरसम्भव कोशिस गरिरहन्थ्यो ।
त्यो महिना वैशाखको थियो, सायद ! ऊ, गन्टरे, राजकुमारलगायत सबै साथी-सङ्गीहरू गाईवस्तु लिएर लागे सेरातिर । ड्यौढीको बाटो हुँदै तिनीहरू सेरातिर लम्कँदै
थिए । माथि रामबस्तीतिरबाट चम्पा पनि बाख्रा लिएर उनीहरूसँग मिसिन आइपुगिन् । विभिन्न किसिमका रमाइला गफ एवम् हाँसीमजाक गर्दै सेरा पुगे । अचम्मको रमणीय ठाउँ थियो, त्यो सेरा ! बाक्लो जङ्गल, त्यसमुन्तिर सेरानामक ठूलो घाँसे चौर र छेवैमा त्रिशूली नदीको भङ्गालो । गोठालाहरूको स्वर्ग नै थियो त्यो ।
सूर्य भगवान् आफ्नो पूर्ण क्षमताका साथ मात्तिदै थिएँ । मौसम निकै उखर्माउलो हुँदै गएकोले सहन गाह्रो हुँदैथियो । त्यसबाट बच्न चम्पालगायत सबैजना गाईवस्तुलाई चर्न छोडेर हेलिए भङ्गालोमा । उनीहरू छोइडूम खेल्दै थिए । कहिले को डूम कहिले को डूम हुने गर्दैथिए । त्यसबखत् छुट्टै संसार निर्माण भइसकेको थियो त्यहाँ । सबैजना छोइडूम खेलमै मस्त थिए भने तीन प्राणी – गन्टरे, राजकुमार र चम्पाचाहिँ अर्कै खेलमा व्यस्त हुने ताकमा देखिन्थे ।
चम्पाले तल फ्रक लगाएकी थिइन् भने माथि रुमाल बेरेकी थिइन् । गन्टरे र राजकुमारले खेलको निहूँमा चम्पाका अवयवहरूलाई छुने, चलाउने गर्न थालेका थिए । जसमा चम्पाको पनि सहमति थियो क्यारे ! उनले विरोध जनाएकी थिइनन् । एकछिनपछि ती तीन प्राणी सबैलाई छोडी जङ्गलतिर बिलाए । अर्थात् पानी अमला खोज्ने निहूँमा राजकुमार र चम्पा गायब भए भने त्यसको केहीबेरमै गन्टेर पनि अलप भयो ।
घर फर्कने बेला भैसक्दा पनि तिनीहरू नफर्केपछि तिनीहरूलाई खोज्न दुइजना साथीलाई साथ लगाएर ऊ जङ्गलतिर पस्यो । धेरैबेरको खोजीपश्चात् उसले चम्पा र राजकुमारलाई भेट्यो । भेट्न त भेट्यो तर उनीहरूको अवस्था देखेर ऊ हेरेकोहेर्‍यै भयो अर्थात् तलको सास तल माथिको सास माथि नै हुने अवस्थामा पुग्यो ।
एउटा ठूलो रुखको फेदमा रुमाल ओछ्याइएको थियो । त्यही रुमालमाथि चम्पा आदिम हब्बाको प्रतिरूप बनेर पल्टेकी थिइन् । नारीलाई आजसम्म उसले आदिम रूपमा देखेको थिएन । जसले गर्दा उसको मनमा रोमाञ्च एवम् डरको संयुक्त भाव एकैचोटि उब्जिरहेको थियो । उता राजकुमार पनि आदमकै व्यवहार अनुसरण गर्दै थियो । चम्पा बेचैन भइसकेकी थिइन् । उनी घरी यता फर्किन्थी, घरी उता । घरी लामो-लामो श्वास फेर्दै अजिङ्गरे शैलीमा ग्वाम्लाङ्ग राजकुमारलाई अँगालो हाल्थी । कुरा यति अगाडि बढ्यो कि असह्य भएर चम्पा बर्बराउन थालिन् । यसबाट राजकुमारले के बुझेछ कुन्नी ! काम्न थाल्यो । यता आदम-हब्बाको खेल चल्दैथ्यो भने उता मूकदर्शक बनेका अन्य प्राणीहरू एकअर्काको मुखमा हेर्दै वाल्ल परिरहेका थिए । त्यहाँ उनीहरूले कति कुरा बुझे, कति कुरा बालमस्तिष्कले गर्दा बुझन सकेनन्, तर रमाइलो भने उनीहरूलाई औधी लागिरहेको थियो ।
केहीबेरपछि उनीहरू एकअर्काबाट छुट्टिए र लमतन्न परेर आफ्नो श्वास व्यवस्थित गर्नतिर लागे । खेल सिद्धिएछ क्यारे ! भन्ठानेर तिनीहरू ती आदमजोडीका सामुन्ने प्रकट
भए । यता गन्टरेले पनि उनीहरूको प्रेमलीलालाई हेरिरहेको रहेछ, ऊ पनि रातो-रातो आँखा पार्दै तिनीहरू भएठाउँमै आइपुग्यो । तिनीहरूको आकस्मिक उपस्थितिले ती दुइ आदमजोडीलाई ‘तातो कराइमा चिसो पानी’ को काम गरेछ क्यारे ! दुवैको अनुहारको रङ्ग उडेको देखियो । उनीहरू हत्तनपत्त लुगा लगाएर मुन्टो लुकाई त्यहाँबाट अलप भए । त्यहाँ उपस्थित ऊ लगायत अन्य प्राणीले केही पनि बुझेनन् ।
समय आफ्नै रफ्तारमा बग्दै रह्यो । तर राजकुमार र चम्पालाई उसले गोठालामा देखेन । त्यसको केही दिनपछि राजकुमार मधेशतिर हानियो रे ! भन्ने खबर उसले पायो । केही समयपछि त्यो खबर पनि सेलायो ।
राजकुमार हराएको हप्तौँ बितिसकेको थियो । बल्ल उसले चम्पाको दर्शन पायो – गोठालोमा ! उही रङ्गरूप, उही लट्काझट्कामा । मानौँ केही भएकै छैन । भेट्नेबित्तिकै ऊलगायत अरू दुइ प्रत्यक्षदर्शीलाई चुइङ्गम दिएर दबेको शब्दमा फकाइन् “कसैलाई नभन्नु है त्यो कुरा !’ । उनीहरूले कुरै नबुझी ‘हुन्छ’ भन्ने सङ्केतमा मुन्टो हल्लाए । उनी झन् उज्याली देखिइन् ।
भोलिपल्ट गन्टरेले चम्पाको नाम ‘चुइङ्गम’ राखिदिएछ । सायद गन्टरेलाई पनि चम्पाले ‘चुइङ्गम’ घुस दिने कोशिस गरिन् होली । त्यो घुस गन्टरेलाई मन परेनछ क्यारे ! १६ वर्षपश्चात् आज अकस्मात् तिनै चम्पा ऊसँग ठोक्किन आइपुगेकी थिइन् र रातो मुख लगाएर नजर लुकाउन बाध्य पनि भएकी थिइन् । चम्पाले ऊसँग जम्काभेट हुँदा के सोचिन् कुन्नी तर यत्रो वर्षछि आज ऊ बल्ल बुझदैछ, गन्टरेले खोजेको घुस अर्कै थियो, सायद ! त्यो उसले पाएको भए चम्पाको नाम – ‘चुइङ्गम’ रहने नै थिएन होला !
कथा समाप्त भयो ।
– नारायणगढ, चितवन
पल्लव साहित्यिक पत्रिका- १२, यौन विशेषङ्कबाट
– चन्द्रमणि अधिकारी
धेरै वर्षपहिलेको कुरो हो । म छ-सात वर्षो हुँदो हुँ । त्यति राम्रो सम्झना त छैन तैपनि त्यसताकाका कुनै-कुनै कुरा भने मेरा मनभरि भएर रहेकै छन् । हामी बिहान स्कूल जान्थ्यौँ । गाउँमा भर्खरर्-भर्खर चेतना जाग्रित भएजस्तो† प्राथमिक स्कूल खोलिएको थियो । एकजना शिक्षक थिए । अङ्ग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, भूगोल र इतिहास यी सबै विषय उनी आफै पढाउँथे । गाउँका ब्राहृमण, नेवार, र्राई, लिम्बू, सुनुवार र विश्वकर्माका छोराछोरी त्यहाँ पढ्थे । एउटै कोठो थियो र बेञ्च-बेञ्चमा केटाकेटी मिलाएर राखिएका हुन्थे अनि ती प्रत्येक बेञ्चलाई अलग-अलग कक्षा भनिन्थ्यो ।
म पढ्नमा निकै तेज थिएँ कि कसो हो, ती शिक्षकले मलाई एकै वर्षा तीन कक्षामा पुर्‍याएका थिए । प्रजातन्त्र आएको छ । अब सबैले पढ्नुपर्छ भनेर घर-घरबाट ल्याएका ती विद्यार्थीहरूमा र्राई, विश्वकर्मा र सुनारका छोरीहरू मभन्दा निकै जेठा थिए र निकै ठूला पनि । तीमध्ये एउटी सुनारकी छोरी थिई – साहिँली । साढे नौ बजे स्कूलबाट बिदा पाइन्थ्यो । घर गएर खाना खाएर गाईबस्तु चराउन जानुपथ्र्यो । गोठालामा पनि एकप्रकारको रमाइलै हुन्थ्यो । ठूला-ठूला गोठाला-गोठाल्नीहरू गफ गरेर, गीत गाएर अनि खेलेर बस्थे । हामी स-सानाले चाहिँ गाईबस्तु हेर्नु, खोज्नु र फर्काउनुपथ्र्यो । कहिले-कहिले हामीलाई मौसमअनुसार फडिर, जामुन र खनिउँ र यस्तै-यस्तै फलहरू ल्याइदिने प्रलोभन देखाएर तिनीहरू हराउँथे । कहाँ जान्थे – के-के गर्थे – हामीलाई कुनै चासो हुँदैनथ्यो । हामी गाई हेथ्र्यौं, खेलहरू खेल्थ्यौँ र यताउताका कुरा गथ्र्यौं । आफ्नै संसारमा रमाउथ्यौँ ।
हाम्रो गौचरन भनेको तल पात्लेखोलाको पुछारको छतिउन टार, त्यसैसँग जोडिएको ज्यामिरेबेसीमाथिको जङ्गल र तमोरतिर हानिएर बग्ने बाख्रेखोलाको वरपर हुन्थ्यो । बेलुका फर्किंदा पनि हामी कहिले घाँसका भारी, कहिले दाउराका भारी र कहिलेकहिले घोचा र थाङ्ग्राहरू लिएर आउने गथ्र्यौं । त्यतिबेलाको समय, परिस्थिति र वातावरणलाई सम्झदा आज पनि एकतमासको आनन्द लागेर आउँछ । दुःख त थियो नै तर पनि हामीले त्यस दुःखलाई सुखमा अनुवाद गरेका रहेछौँ । म सम्झन्छु आज । गोठालाहरूमध्येमा सबैभन्दा सानो केटो म नै थिएँ । मभन्दा ठूली त्यही साहिँली थिई – सुनार केटी । उसलाई सानो जातकी भनेर सबैजना हेप्थे भने मलाई चैँ सानो केटो भनेर । त्यसो हुँदा धेरैजसो गाई छेक्ने र फर्काउनेमा साहिँली र म नै पथ्र्यौं ।
एकदिन मात्र होइन । गोठाले जीवनमा सधैँको दिनचर्या यस्तै नै हुन्थ्यो । साहिँली मलाई भाइलाई जस्तै माया गर्थी । घाँस-दाउरा खोजिदिन्थी, फलहरू टिपेर दिइरहन्थी अनि पालोमा गाई पनि फर्काइदिन्थी । मभन्दा अग्ली थिई ऊ । मलाई लाग्छ – ऊ त्यसबेला पन्ध्रसोह्रकी हुँदी हो । सलक्क परेका भरिला पाखुरा थिए उसका अनि फ्रक छेड्नेगरी भुक्क-भुक्क उठेका कठिन उरयुग्म । स्कूल जान थालेकीले फ्रक लगाउन थालेकी थिई उसले । मिलेका दाँत थिए । स्कूलका सरले निम वा कदमले दाँत माझनुपर्छ भनी सिकाएकै थिए । सेता दाँत टिलिक्क टल्काएर जब मुसुक्क हाँस्थी ऊ उसका दुवै गालामा खाल्डो पथ्र्यो । यो दृश्य खूब मनपथ्र्यो मलाई । त्यसैले निर्निमेष दृष्टिले हेरिहन्थेँ म । एकदिनको कुरो हो । असारको महिना – लामा दिन थिए । घरि घाम चर्कन्थ्यो घरि पानी दर्कन्थ्यो । जङ्गलमा पुग्नेबित्तिकै बुथुरी, टङ्के, आशमाया र बाहुनदाइ आँप र फडिर खोज्न भनेर हिँडे । गाई हेर्नेमा साहिँली र म मात्र पर्‍यौँ । त्यसदिन साहिँलीले मसँग धेरै कुरा गरी । मभन्दा सात-आठ वर्षे जेठी । मैलेभन्दा बढी नै बुझेकी थिई होली । रमाइला-रमाइला दन्त्यकथा सुनाई, गीत सुनाई र अरूअरू कुरा पनि गरी । ठूलो रुखको फेदमा बसेका थियौँ हामी । एउटा ढुङ्गो मेरो आसन थियो । अर्को ढुङ्गामाथि ऊ बसेकी थिई । नजिकैबाट बाख्रेखोलो बगिरहेको थियो कलकल-कलकल । कुइनेटो परेको भाग हुनाले सानो ओडारजस्तो पनि थियो । हामी गफमा डुबेछौँ । गाईबस्तुको पनि होस् भएन र दाजुदिदीहरूको पनि सम्झना भएन । निर्लिप्त भएछौँ हामी गफमा । के थिए त्यस्ता रमाइला गफ र कुराहरू – सम्झन्न म आज । यति कुराको सम्झना छ – उसले शिशिर-वसन्तको कथा भनेकी थिई । ढुङ्गामा चाक अड्याएर दुवै खुट्टा टेकेर बसेकी थिई ऊ र उसका ठीक अगाडि म पनि त्यसैगरी बसेको थिएँ । बर्साईको क्रममा उसको फ्रकको अगाडिपट्टिको भाग घुँडामाथि परेर उचालिएछ । मैले देखिहालेँ – मन्दिरको ढोकै अगाडि द्वारपाल बसेका दुइथान गरुडझैँ सेता कल-कलाउँदा उसका उरु-जङ्घा । त्यसका बीचमा मण्डलाकार मेखला र मेखलाका पनि बीचमा दुलोबाट र्सप-भ्यागुता आदि केहीले चियाएजस्तो ढिस्को अनि मेखलाका वरिपरि पातलो रौँबारी† जो धवल उरुका कारणले प्रकाशित भएर र्छलङ्ग देखिन्थ्यो । सुरुमा त मैले त्यसलाई आँफूले सधैँ पूजा गर्ने गरेको शिवजी मन्दिरभित्रको शिवलिङ्ग नै देखेँ ।
पछि थाहा पाएँ – त्यो त छाडा कुरा पो रहेछ । मेरो केटाकेटी बुद्धि वा भनौँ चञ्चले मन, खितितिति हाँसेछु म । तेस्रो व्यक्ति कोही छैन, हामी दुइजना मात्र छौँ । त्यसमा पनि ऊ अति नै मार्मिक र कारुणिक कथा भन्दैथिई । हाँस्नुपर्ने विषय नै थिएन । झसङ्ग भई र आर्श्चर्य मान्दै सोध्न थाली साहिँली । किन हाँस्यौ दीपु – भन न, किन हाँस्यौ – मसँग कुनै जवाफ थिएन । भन्न सक्ने आँट पनि थिएन र भन्नु हुँदैन – लाज हुन्छ । त्यो त छाडा कुरा हो भन्ने मात्र ज्ञान थियो । तर, धरै दिइन
साहिँलीले । पहिले सम्झाई, फेरि फकाई अनि डर देखाई । म बबुरो विवश भएँ, डर लुकाउने ठाउँ कतै पाइनँ र अल्पअल्पमै भनेँ – कट्टू ।
मैले ‘कट्टू’ भन्नासाथ साहिँलीले बुझिछ क्यार – “मैले कट्टू लाएको थिइन, यसले मेरो ढिकुटी र र्सवस्व देखेछ” भन्ने । भनी – धत् झ् त्यसमा पनि हाँस्ने त – तिमी र म त दिदी-भाइ पो त । हेर न आज स्कूलबाट घर पुगेपछि हतार-हतार लुगा फेरेर भात खाइयो अनि गाई फुकाइहालियो कट्टू लाउनै बिर्से । तिमीलाई सारै लाज लाग्यो कि कसो – ए, भाइ मान्छे त झ् खै यता आऊ भन्दै उसले मलाई तानी र आफ्नो काखमा बर्साई अनि अत्यन्त धेरै माया गरेजस्तो गर्न थाली । ‘देखेँ’ भनेर कसैलाई पनि नभन्नू ल । उसले फेरि भनी – खै – त्रि्रो पनि हेर्छु अनि बराबर हुन्छ । तिमीले अरूलाई भन्छौ होला । ऊ ठूली थिई, बलिई थिई र जसो पनि गर्न सक्थी । मेरो हृवाङ्लाङ्ङ परेको कट्टूभित्र हात छिर्राई उसले । मेरो बिचरो सानो जुकोजत्रो लुकानोलाई छामी, समाई र हल्लाई । मलाई लाज लाग्यो, सारै लाज लाग्यो । डर पनि लाग्यो र रोएँ म । उसले मलाई फकाई । साहिँलीले भनी – हेर, अहिले केटाकेटी नै भए पनि लोग्नेमान्छे हौ तिमी । यसरी रुनु र डराउनु हुँदैन । पछि तिमी ठूलो भएपछि त्रि्रोमा पनि यस्तै के-के पलाउँछ । यो पनि ठूलो हुन्छ । यसले पिसाब गर्ने मात्र होइन अरू पनि के-के काम गर्नुपर्छ । साहिँलीको ‘अरू पनि के-के काम गर्नुपर्छ’ भन्ने वाक्यले उत्सुक भएँ म र जिज्ञासा प्रकट गरेँ – अरू के-के काम गर्नुपर्छ – साहिँली झ् तँलाई थाहा छ – भन् न साहिँली, के-के गर्नुपर्छ – मेरो बालमन र अबोधपन अनि तारुण्यको सिँढीमा चढ्दै गरेकी वयःसन्धिकी साहिँली । उसले भनी – हुन्छ हुन्छ भन्छु तर तिमीले साहिँलीले भनेको भनेर कसैलाई पनि भन्नु हुँदैन नि । मैले कसैलाई नभन्ने वाचा गरेपछि साहिँलीले भन्न सुरु गरी । हेर दीपु झ् भोलिपर्सी तिमी ठूलो भएपछि त्रि्रो बिहे हुन्छ । तिमीले बाबु बन्नर्ुपर्छ । त्रि्री दुलहीले आमा बन्नुपर्छ । तिमीहरू दुवैजनाको सुत्ने एउटै ओछ्यान हुन्छ, एउटैमा सुत्नुपर्छ । राति लुगा लगाएर सुत्नु हुँदैन । नाङ्गै सुत्नर्ुपर्छ । कुरा बुझयौ दीपु – त्रि्री दुलहीको पनि मेरोजस्तै अघि देखेका थियौ नि हो त्यस्तै हुन्छ । अनि यस्तो पनि हुन्छ भन्दै उसले फ्रक खोलेर उसका छातीमा बुर्लुक-बुर्लुक उफ्रिएका उरोज देखाई । मैले अचम्म र उदेक मान्दै साहिँलीलाई हेरिरहेँ । बिस्तारै भनेँ – यस्तो त आमाको पनि छ ।
अनि फेरि साहिँलीले भनी – हो त सानोछँदा आमासँग सुत्नुपर्छ, आमाको दूध खानर्ुपर्छ अनि ठूलो भएपछि दुलहीसँग सुत्नर्ुपर्दछ र दुलहीकै दूध चुस्नर्ुपर्छ । लु आऊ अब तिमी र म
खेलौँ । म आमा तिमी छोरा ल भाइ झ् त्यसपछि ऊ सुती, मलाई पनि सुताई र मुन्टा भित्र दबेका उसका स्तनमा मेरो मुख लगाउन लगाई । उसका स्तनहरू पोटिला थिए, नरम थिए र ताता थिए तर आमाका जस्ता लुम्रा थिएनन् । यो कुरा उसलाई पनि भनेँ मैले । त्यसपछि मेरा साना हातहरूले उसका कठिन स्तनहरूलाई छाम्नु, चलाउनु, खेलाउनु र सुम्सुम्याउनु पर्ने भयो । मलाई खेलाइराख्न, चलाइराख्न र सुम्सुम्याइराख्न भनियो । उसलाई डसना बनाएर घोप्टिनु पर्‍यो मैले । यन्त्रवत् चल्दै गएँ म । साहिँली सिकाउँदै-अराउँदै गई । म खप्टिँदै-घोप्टिँदै गए । ऊ भन्दै थिई – भोलिपर्सी तिम्रो बिहे भएपछि तिमीलाई कसले सिकाउँछ र । मलाई सोध्नुथियो – दुलही जान्दछे होली नि त । तर सोध्न पाइनँ किनभने उसले मेरो ध्यान मोडिदिई आऊ† तिमी पनि मजस्तै होऊ भनेर अनि मेरो कट्टू खोलिदिई । मेरा हातहरू समाएर उसका अङ्ग-अङ्गमा दौर्डाई उसले कहिले गालामा, कहिले घाँटीमा, कहिले त्रि्रामा, कहिले नाभीमा त कहिले त्यसभन्दा तलको संवेदनशील अङ्गमा ।
मैले अनुभव गरेँ – उसको शरीर एकदम तातेको थियो र ऊ लामो निःश्वास लिइरहेकी थिई । मेरो संवेदनशील अङ्गलाई चलाउँदै खेलाउँदै गर्न थाली । मेरो त्यस अङ्गको पनि केही रूप र आकार नबदलिएको होइन तर साहिँलीले भने र चाहेजस्तो हुने मेरो उमेरै भएको थिएन । वर्ीयको थैली खाली नै हुँदो हो । कामवासनाका कुरा अवचेतनमा हुँदा हुन्, सुषुप्त हुँदा हुन् । यसैबीच मैले थाहा पाएँ – साहिँलीको संवेदनशील अङ्ग रसिलो र लथपथ भएको थियो । ऊ हामी दुइका ती भिन्न-भिन्न प्रकृति र आकारका इन्द्रियहरूको मेल गराउने प्रयासमा थिई । त्यसपछि उसले दुवै हातले मेरो कम्मर समाएकी थिई अनि तलबाट माथितिर उचालिन्थी ऊ । मेरो शरीर थकित भइसकेको थियो । गलेको थिएँ म यो विचित्रको खेल नबुझेर । केहीबेरपछि ऊ पनि उठी, गलिछ । राति मलाई ज्वरो आयो । भोलिपल्ट म गोठालो जान सकिनँ । साहिँलीले नै मेरा बस्तु पनि लगिदिई । दिउँसो मैले सम्भिmएँ – आज साहिँलीले हिजोको जस्तो खेल कोसँग खेलिहोला – टङ्केसँग कि बाहुनदाइसँग झ् फेरि बुथुरी र आशमाया पनि त थिए । मलाई सञ्चो भएपछि मैले गोठालो जानु नपर्ने भयो । बिहान भाषा पाठशालामा संस्कृत पढ्न र दिउँसो हाइस्कूलमा अङ्ग्रेजी पढ्न जानुपर्ने भयो । म सधैँ साहिँलीलाई सम्झरहन्थेँ । साहिँलीले खेलाएको खेल सम्भिmरहन्थेँ । केही आर्श्चर्य लाग्थ्यो र केही दिग्दारी पनि । साहिँलीले ‘नभन्नु’ भनेकीले यो कुरा मैले कसैलाई भनिनँ पनि ।
त्यसको सात वर्षछि मैले प्रवेशिका परीक्षा दिएँ । परीक्षापश्चात् बल्ल गोठालो जान पाइयो । दुइ-तीन महिनासम्म फु_सद । त्यतिञ्जेलसम्ममा टङ्के बुथुरी टिपेर मधेश भासिइसकेको थियो भने बाहुनदाइ आशमायालाई टिपेर आसाम भासिइसकेका थिए । ती ठाउँहरूमा अरू ससाना गोठाला-गोठाल्नीहरू भर्ना भइसकेका थिए । अब गोठालामा ठूला भनेका साहिँली र म नै थियौँ । त्यही चौर, त्यही ओडार, त्यही खोलो, त्यही जङ्गल अनि त्यही साहिँली र म । फरक यति थियो – म त्यतिबेलाकी साहिँलीजस्तो भएको थिएँ र साहिँली भने अझ परिपक्व । त्यो महिना असार थियो र यो भने माघ । यसै महिना साहिँलीको बिहे भएको थियो । साइत नजुरेकाले मैतालु पठाइएको थिएन । छतिवन टारबाट ओरालो लाग्दै गएपछि ती सबै ठाउँहरू मलाई उद्दीपन विभाव भएर आए । केटाकेटी गोठालालाई बस्तु फर्काउन पठाएपछि मैले भनेँ – साहिँली तैँले कसैलाई ‘नभन्नु’ भनेको कुरो मैले कसैलाई भनेको छैन । उसले पुलुक्क मतिर हेरी र मुसुक्क हाँसी । मैले बिस्तारै उसको हात समाएँ, उसलाई मतिर तानेँ । उसले कुनै प्रतिक्रिया व्यक्त गरिन । त्यसपछि अँगालोभरि कसेँ । मैले उसलाई भनेँ – आज म तँलाई सिकाउँछु ल । अनि उसका अधरलाई मेरा दुइ ओँठले च्वाप्प पारेँ । यसपटक साहिँलीले कुनै प्रयास गर्नुपरेन किनभने सात वर्षपहिलेको जुको अहिले गोमन भइसकेको थियो । साहिँलीको बिहे भइसकेकाले मलाई कुनै डर पनि थिएन । तर पनि भनेँ – साहिँली झ् यो कुरा कसैलाई पनि नभन्नु है ।
साहिँलीलाई वैशाखमा मात्र मैतालु पठाइयो । म चैत्रसम्म नै साहिँलीसँग गोठालो गइरहेँ ।
१५/९९ धरान, सुनसरी
मलाई मेरो कृष्णको औधी आवश्यकता छ
– लक्ष्मी शर्मा
समय बित्दै गयो । म पनि व्यवहारको बोझमा थिचिएकी थिएँ । बिस्तारै भाइ, बहिनीले पनि आफ्नो-आफ्नो पढाइ पूरा गरे । भाइ-बहिनीले पनि मलाई दिज्यू हजुरले विवाह गर्नुस् भन्ने गर्थे । आमाबाबा दुवैको सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएकोले घर चलाउँदै र बाबाको कार्य व्यवहार हेर्दै समयले नेटो काटिसकेछ । मैले तीस वर्षनाघिसकेछु । आज नयाँ साल लागेको दिन† हामी तीनै दिदीभाइ बसेर हिसाब गर्‍यौँ र पो म झल्यास्स भएँ । मेरो कताकता अचेतन मनभित्र विवाह गर्ने इच्छा पलायो, तर मैले भाइबहिनीसित भन्न सकिनँ । भाइबहिनी पनि विवाह गर्न लायक भएका थिए । भाइबहिनी दुवैको यही वर्षभत्र विवाह गर्नुपर्छ भन्ने लागेको थियो ।
भाइले त एउटा घरनजिकैकी केटीलाई मन पराएको थियो, बहिनीको चाहिँ कोसित विवाह गर्ने होला – कसरी गर्ने होला – यस्तै कुरा खेलाउँदै थिएँ । नववर्षो शुभकामनाको आदानप्रदान गर्नेको फोनको घण्टी घरमा बजिरहेको थियो । कहिले भाइका साथी, कहिले बहिनीका साथी, कहिले मेरै साथीको फोनका घण्टीले घरमा रौनक ल्याइरहेको थियो । म सधैँभन्दा आज धेरै भान्सामा व्यस्त थिए । भाइबहिनीलाई मनपर्ने खानेकुराका परिकार तयार पार्दै मलाई फर्ुसद थिएन । बहिनीचाहिँ बिहानदेखि शृङ्गारपटार गरेर अनि राम्री देखिएकी थिई । कहिलेकाहीँ त मलाई पनि बहिनीले शृङ्गारपटार गर्दा भित्रदेखि डाहा लाग्दथ्यो । तर म झट्ट आफूलाई सम्हालेर मनलाई सम्झाउँथेँ हैन म पनि आमाबाबा भएका भए शृङ्गारपटार गरेर नक्कल पारेर साथीसँग कति घुम्थेँ होला । बिचरा बहिनी हो, उसको हक छ, म जेठी परेँ, मैले पो व्यवहार सम्हाल्न कर लाग्यो र शृङ्गारतिर ध्यान दिइनँ । मैले भाइबहिनीलाई आमा-बाबाको अभाव बिर्सा सक्नु्पर्छ । त्यसैले कुनै कुरामा पनि कहिल्यै रोकटोक गरिनँ । बरु जस्तो आमाबाबा हुँदा पाउने सुविधा थियो त्योभन्दा बढ्ता उनीहरूलाई दिँदै गएँ । हामीलाई सम्पत्तिको कमी थिएन । बाबाले जोडिदिएको खेतबारीले हामीलाई खर्च पुगिरहेको थियो । मेरो अधिकृत तहको जागिरको कमाईले पनि भाइबहिनीको विवाह गर्न पुग्थ्यो ।
म धेरै एकोहोरिएर सोचिराखेकोले पालकपनिरको पानी सुकेर डढेको गन्ध बाहिरसम्म पुगेछ । भाइले दिज्यू के डढ्यो भन्दै भान्सातिर आउँदा पो म झल्यास्स भएँ र झट्ट पालकपनिरमा पानी हालेर, खाना तयार भयो, भाइ, अब खान आऊ, बहिनीलाई पनि बोलाऊ भनेँ । भाइ मेरो नजिक आयो र भन्यो “दिज्यू हजुरले किन यति दुःख गर्नुहुन्छ, अब यो वर्षमैले नोकरी गरेपछि घरको व्यवहारको जिम्मा मेरो । हजुरले पनि बहिनीले जस्तै शृङ्गार गर्ने गर्नु न दिज्यू, हजुर त त्यसै ब्यूटी झन् ब्यूटी हुनुहुन्थ्यो” भन्दै जिस्काउँदै मेरो नकोरेको कपाल तानेर जुरो फुकालिदियो । ल बहिनीलाई बोलाएर खाना बाहिर टेबुलमा लगाऊ म कपाल कोरेर आउँछु भन्दै म भान्साबाट निस्केर कपाल कोर्न कोठामा गएँ । बहिनी कोठामा फोन गर्दै थिई । आज ऊ साथीसँग बाहिर घुम्न जाने कुरा हुँदै थियो । मैले ऐनामा आफ्नो अनुहार हेरेँ । किन हो कुन्नी आफ्नै अनुहार बारबार ऐनामा हेरिरहू जस्तो लाग्यो । मैले आफू तीस वर्षलागेको महसुस नै गरिनँ । अस्ति भर्खर मलाई कृष्णले विवाह गर्ने होइन भन्दै अफिसमा छेडछाड गर्दै थियो । मैले कोसित भनेर सोद्धा उसले कोसित नि मसित भनेको थियो । म तिमी भनेपछि हुरुक्क हुन्छ उसले थपेर भन्यो । ऊ अहिले अमेरिकामा राजदुत भएर गएको छ । हुन त ऊ परिवारवाला मान्छे हो । मलाई विश्वास छ उसले मैले भनेपछि परिवार पनि छोड्छ । आज बिहानै उसले मलाई नयाँ वर्षो शुभकामना दिएको थियो फोनबाट । मलाई थाहा छ, उसले मलाई साँच्चिकै माया गर्छ । तर म उसलाई अपनाउन सक्दिनँ किनभने उसको परिवार छ । अचेतन मनले उसलाई आफ्नो बनाए पनि चेतन मनले भने म त्यसो गर्न सक्दिनँ ।
हामी तीन दिदी, भाइ, बहिनी मिलेर खाना खायौँ । भाइ, बहिनी आफ्ना-आफ्ना साथीसँग घुम्न गए । म कोठा, चोटा सफा-सुग्घर गरेर घरैमा बसेँ । बेलुका भाइबहिनीले विवाह गर्ने कुरा मेरो साम्ने राखे मैले तिनीहरूको विवाह गरेपछि मात्र म गर्छुनेँ ।
आज फेरि पाँच वर्षछि नयाँ वर्षो आगमन भएको छ । भाइबहिनीले घर बसाएर पनि बालबच्चा भइसकेका छन् । भाइ प्राइभेट बैङ्कको मेनेजर भयो । बहिनी जि.एम.की श्रीमती । दुवैको चकाचक छ । मलाई भाइले बूढोघर दिएको छ । दिज्यू हजुरले विवाह गर्नु, आज पनि भाइ फोन गर्दा भन्ने गर्छ । कहिलेकाहीँ मकहाँ भाइ आउँछ । म पनि कहिलेकाहीँ उसकोमा जान्छु । पहिलाको जस्तो नयाँ वर्षो आगमन भने यो घरमा हुन छाडेको छ । फोनका घण्टी पातलिएका छन् । तर पनि मेरो कृष्ण मेरै छ । ऊ प्रत्येक नयाँ वर्षा मलाई सम्झन्छ र शुभकामना दिन्छ । केही न केही त उसले मलाई पठाइरहेकै हुन्छ । कहिलेकाहीँ म उसले दिएका सामान नखोली त्यसै राख्छु । तर पछि नखोली नहेरी मनै मान्दैन । आज त मैले पनि भनिदिएँ, कृष्ण म तिमीसित विवाह गर्छर्ुुनेर । उसले विश्वास नगरेर बिहानदेखि अहिलेसम्म अमेरिकाबाट पाँचपटक फोन गरिसक्यो । उसले भन्यो “प्रिया झ् साँच्ची भनेकी हौ कि मजाक मात्र हो, आज के भयो – म तीन दिनभित्र त्रि्रो घरमा आउँदैछु । म तिमीलाई बगलामुखी माताको सामुन्ने विवाह गरेर अमेरिका लिएर र्फकन्छु ।” तर मलाई चाहिँ भनिहालेँ भनेर डर लागिरहेछ । ऊ राजदूत हो । पत्रिकाले भोलि यो खबर छापेर समाचार बनाउन सक्छ मेरो पनि त इज्जत छ नि झ् त्यो प्रिया विवाह गर्दिनँ भन्थी आज त अर्काको घर बिगारेर गई भन्नेछन् धेरैले । हुन त कृष्णसँगको मेरो प्रेम उसको विवाह नहुँदैदेखि हो । उसले त भनेकै थियो, “प्रिया, तिमी मेरी जेठी हौ । म यो कुरा मेरी हुनेवालीसँग पनि भन्छु ।” उसले भन्यो-भनेन, उही जानोस् तर मेरो कृष्ण डराउनेवाला छैन । उसले मलाई हरहालत राम्ररी राख्छ भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ । मैले आफूलाई नियालेँ, म पैँतीस वर्षी भएकी छु† अब पनि विवाह गरिनँ भने मेरा बालबच्चा हुँदैनन् । यसपाली म विवाह गर्न र बच्चा जन्माउन लालायित छु । मभित्रको मातृवात्सल्य सल्बलाएको छ । कृष्णसँग विवाह गरी छोरो पाएर लोर्के छोरालाई डोर्‍याउँदै हिँड्न मलाई मन लागेको छ । त्यसैले आज मलाई मेरो कृष्णको औधी आवश्यकता छ ।
– भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस
पहाडको थुम्कोमाथि तामाङ्हरूको बाक्लो बस्ती । स-साना खरले छाएका घरहरू । सबैको घर छेउछाउमा मकैका ढोडले अनिवार्य रुपले निर्माण गरिएको करेसाबारी । त्यहीँ करेसाबारीभित्र लहलाउँदो सागपातका बोटहरू अनि त्यहीँ सागबारीभित्र सुरक्षित ठानेर भुतली खेल्ने कुखुराका बथानहरू । गाउँमा भर्खर्रभर्खर बिजुलीबत्ती पुगेको थियो । रात्रीको समयमा त्यस गाउँलाई टाढा-टाढाबाट हेर्दा साह्रै मनमोहक दृष्य देखिन्थ्यो । मानिलिऊँ काँचको पर्दाभित्र निर्माण गरिएको ताजमहलको थुम्कोमा बिजुलीको प्रकाश छरिदिएजस्तो । त्यस गाउँमा महिनाको एकदिन बिजुलीको मिटर रिडिङको लागि मेरो पालो आउँथ्यो तर म त्यस गाउँमा जान डराउथेँ । कारण अधिकांसको घरमा मान्छेभन्दा बढी कुकुर भेटिन्थे । देख्दै डरलाग्दो अनि आक्रमक पारामा नयाँ मानिसलाई स्वागत गर्ने गर्थे त्यहाँका कुकुरहरू । म डराइडराइ छिर्थेँ त्यस गाउँमा ।
भन्न पनि अप्ठेरो म कुकुरको डरले त्यस गाउँमा छिर्ने हिम्मत गर्दिन । कसैले सुन्यो भने पनि के भन्ला, कति गिल्ला गर्ला । एक किसिमले मुटुलाई दरो बनाएको ढोँग रच्दै म गाउँ छिर्थे । कतिको घरमा त अनुमानले नै मिटरको नम्बर लेख्दै हिँड्थे ।
त्यहीँमध्ये एउटा घर थियो जून घरमा पहिलो दिन नै मिटर रिडिङको लागि जाँदा कुकुरले सातो लिएथ्यो । आज पनि नजाने निर्णयले नजिकैबाटै अर्को घरमा बिल बुझाएर जाँदै थिएँ एक युवतीले हकारिन् ।
‘के मेरो घरको बिल त्यो घरको मान्छेले तिर्छ हो – नत्र किन मेरो घरमा मिटर चेक गर्नुहुन्न -‘
‘तपाईँको घरको कुकुरले पहिले नै मेरो सातो लिइसक्यो त्यसैले’-जवाफ दिएँ । ‘ल आउनुस् म बाँधिदिन्छु कुकुरलाई’- उनले मलाई लिएर गइन् उनको घरमा ।
सानो झुप्रो घर अलिअलि अध्याँरो, र्टचको प्रकाश घुमाउँदै म चोटामा पुगेँ । मिटरपनि कस्तो कुनामा राखिएको अनि धुवाँले गर्दा स्पष्ट नदेखिने । मैले पानीमा कपडा भिजाएर ल्याउन भनेँ । उनले त्यसै गरिन् । मैले उनको घरको मिटरको अंक टिपेँ । ओर्लन खोज्दा बडेमाको कुकुर चोटामै उक्लियो । भागौँ कता भागौँ । म आत्तिँदै भित्री कोठातर्फपो लागेछु । कोठाभित्र उनी केटीहरूको माथिल्लो भागमा लगाउने पहिरनलाई मिलाउने कोशिसमा रहेछिन् । त्यसमा भएको हुक भनेको ठाउँमा नअड्किनाले समस्यामा पारिरहेको रहेछ । म देखे नदेखेझै गरी मुन्टो फर्काएर उभिएँ । शंका लाग्यो यो उनकै करतुत त हैन बाँधिएको कुकुर फुकाउनु-! यत्तिकैमा उन्को समधुर शब्द सुनेँ . . .
‘मेरो ब्राको हुक अड्काइदिनुस् न प्लिज’- म अलमल्लमा परेँ ।
'के सुन्नु भएन ?' – फेरी अर्को झड्का दिइन् ।
म मरें अब फसादमा परेँ । के काममा आएको के अनर्थ हुने हो । म नजिक गएँ हुक मिलाइदिन । उनले च्याप्प मेरो हात समातेर झड्कारिन । म ढुन्मुनिँदै खाटमा लम्पसार पर्न पुगेछु । उनी मैसँगै पो ओइरिसकिछिन् । उनको अनौठो ठाउँमा पो मेरो हात पुगेछ । मैले उठ्ने कोशिस गरेँ, उनले त्यहीँ अवस्थामा रहन बल प्रयोग गरिन् । ‘कमसेकम झोला राख्न त दिनुस्- जंगिदै मैले झोला भुँइमा थचारेँ ।
आए आँप गए झटारो । उनी पहिले नै चालु भैसकेकी थिइन् । केहीबेरमै म पनि यन्त्र बन्न पुगे जो उनीबाट सञ्चालित छु । एकैछिन् अगाडि भर्भराउँदी देखिने ती युवती अहिले नागले फणा फुलाएझैँ मलाई डस्दै थिइन् । संकोचले जतिसुकै कक्रिए पनि आखिर मैन आगोको अगाडि पग्लन्छ नै । म कतिखेर पग्लिएँ थाहा भएन् । उनको दुवै बाहुले मलाई च्यापिरहेका थिए । लामोलामो श्वास फेराइको गुन्जायमानले घरमा एककिसिमको संगीत छरिरहेको थियो । त्यहीँ संगीतभित्र ताल मिलाउन कहिले क्लासिकल पारामा, कहिले मोर्डन पारामा त कहिले सामान्य पारामा निकै बेर हामीले नृत्य गरिरह्यौँ । नृत्यको अन्तिम चरणमा उनले आफूलाई रंगमञ्चमा लम्पसार पारेर तृप्त मुद्रामा प्राण छोडेझै छाडिन् । म उठेँ आफूलाई मिलाएँ अनि बाहिरिएँ । अघि खाउँला झै गर्ने कुकुर ढोकाबाट टुलुटुलु हेर्दै रहेछ । अहिले त्यसले भुक्तासम्म पनि भुकेन् । आँगनमा आइपुग्दा चोटाको झ्यालबाट उनी कराउँदै थिइन्- ‘नडराए हुन्छ दाजु अब यो कुकुरले कहिले पनि तपाईँलाई केही गर्दैन ।’ हत्तार हत्तार म बाटो लागेँ ।
- सुनील स्पन्दन
डा. घनश्याम न्यौपाने ‘परिश्रमी’
लघु यौन कथा
आफ्नो फुपू एउटा धार्मिक सम्प्रदायसँग आबद्ध भएकीले समिधामा पनि बाल्यकालदेखि नै त्यसको प्रभाव परेको थियो । जगत्लाई मिथ्या र जीवनलाई क्षणभङ्गुर ठान्ने समिधा सांसारिक मोहको जञ्जालमा फस्न चाहन्नथिन् । त्यसैले उनले आजीवन अविवाहित रहने निर्णयगरेकी थिइन् । उनको जीवनमा पनि प्रकृतिको नियमअनुसार स्वाभाविक रूपले कैशोर्यपछि यौवनले प्रवेश गरेको थियो । सात्त्विक भोजन र आध्यात्मिक चिन्तन आदिले उनले यौवनोचित आवेगलाई नियन्त्रणमा राखेकी थिइन् । समिधा परमेश्वरकी परमभक्त थिइन् । मोक्षका निम्ति रतिलाई दबाउँदै उनी हरघडी इश्वरीय उपासना र ध्यानमा तन्मयतापूर्वक लागेकी हुन्थिन् ।
एकदिन राति समिधाको जीवनमा अनपेक्षित घटना घटित भयो । “तिमीले मलाई साह्रै प्रेम गर्‍यौ† तर मैले तिमीलाई प्रेम गर्न सकिनँ । त्यसैले प्रिय, म आज तिमीलाई हार्दिक प्रेम गर्न आएको छु” भन्दै परमेश्वर अचानक उनीसामु उपस्थित भए । सुरुमा त भगवान्को दर्शन पाएँ भनेर समिधा अत्यन्त प्रसन्न भइन् । तर जब परमेश्वरले उनका संवेदनशील अङ्गहरू सुम्सुम्याउँदै चुम्बन गर्न लागे उनलाई असहज आश्चर्य बोध भयो । तर क्रमशः उनले आनन्दातिरेकको अनुभूति गर्न थालिन् । सम्भवतः इश्वरीय उपासनाका क्रममा यस्तो आनन्द उनले कहिल्यै प्राप्त गरेकी थिइनन् । त्यो स्वप्नसम्भोगको आनन्दपछि उनको मानसिकता नै बदलिएको छ । अहिले उनलाई त्यस्तै आनन्द यथार्थमा पनि प्राप्त गर्ने अव्यक्त चाहनाले कुत्कुत्याइरहेको छ ।
– भैरहवा बहुमुखी क्याम्पस, भैरहवा ।